पुराना तस्बिर संकलक सुनील उलकलाई १२ प्रश्न - संवाद - नेपाल
पुराना तस्बिर संकलक सुनील उलकलाई १२ प्रश्न
पोखराका सुनील उलक, ४७, पुराना तस्बिर संकलक हुन् । उनीसँग अहिले नेपालमा खिचिएका ५० वर्षभन्दा पुराना झन्डै ३० हजार प्रति तस्बिर छन् । विभिन्न व्यक्तिले खिचेका मूल प्रति नै मागेर उनले यति धेरै तस्बिर संकलन गरेका हुन् । त्यसरी संकलन गरिएका पोखराका ८३ तस्बिर १२ देखि १४ चैतसम्म पोखरामा प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।
पोखराका पुराना तस्बिर प्रदर्शनीमा राख्नुको उद्देश्य ?
पोखराको प्राचीन जीवनशैली नयाँ पुस्तालाई देखाउन र प्रौढ उमेर कालाई आफ्नै जीवनकालको फ्ल्यासब्याक गराउन ।
बूढाबूढीलाई त तस्बिर हेर्न गाह्रो होला नि ?
७० वर्ष उमेर कटेकालाई प्रोजेक्टरको सहायताले देखाउने प्रयास गरेका छौँ ।
तपाईंसँग पोखराको सबैभन्दा पुरानो तस्बिरचाहिँ कुन छ ?
नेपालकै पहिलो फोटोग्राफर दीर्घमान चित्रकारले विसं १९८१ मा खिचेको तस्बिर छ ।
कहिलेदेखि पुराना तस्बिर संकलन गर्न थाल्नुभएको हो र किन ?
साढे दुई वर्ष भयो । आफूसँग भएका केही पुराना तस्बिर फेसबुकमा अपलोड गर्थें । तस्बिर देखेर साथीहरूले संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिए । अनि, जम्मा पार्न थालेँ । त्यसअघि नोट–सिक्का र हुलाक टिकट संकलन गर्थें ।
अहिलेसम्म कति तस्बिर संकलन गर्नुभयो ?
नेपालभर खिचिएका ५० वर्षभन्दा पुराना करिब ३० हजार तस्बिर छन् ।
पैसा तिरेर नै संकलन गर्नुभएको हो ?
बिनापैसा । पैसा नतिर्ने भएकाले नै काठमाडौँस्थित बेलायती पुस्तकालयमा रहेका करिब आठ हजार पुराना तस्बिर ल्याउन सकिएन । उहाँहरूले पैसा नलिई दिनुभएन ।
किन नकिन्ने ? पैसा नभएर कि अरू कारणले ?
हाम्रो देशमा खिचेका तस्बिर त हाम्रै सम्पत्ति न हुन् । आफ्नै सम्पत्ति किन्ने होइन, फिर्ता माग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यो त गाह्रो काम होइन ? तस्बिर खिचेपछि त उसको सम्पत्ति हो नि !
उनीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने हिसाबले आफ्ना योजना बताएर कुरा बुझाउँदा गाह्रो छैन । तर, सोचेजस्तो सजिलो पनि रहेनछ ।
यत्तिका तस्बिर संकलन गरेर के गर्ने विचार छ ?
सुरुमा त रहरले नै संकलन गरेको हुँ । यति ठूलो संख्यामा संकलन गरिसकेपछि अब भने पोखरामा एउटा फोटोग्राफिक म्युजियम बनाउने सोच छ । किनभने, यी तस्बिर ममा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन । यसलाई सार्वजनिक गरेर त्यतिबेलाको नेपाली समाज आजको पुस्तालाई देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ ।
म्युजियममा पुराना तस्बिर मात्रै हुन्छन् कि अरू पनि केही राखिन्छ ?
विसं ०१३ मा पोखरामा खिचिएको एउटा ‘फिल्म’ भेटिएको छ । फोटोग्राफिक म्युजियम भन्नासाथ तस्बिरसँग सम्बन्धित कुरा नै मुख्य हुन्छन् । त्यतिबेलाका तस्बिर धुलाउने सामग्री, क्यामेरा, रिल आदि पनि राखिनेछ ।
तस्बिरजसरी क्यामेरा पनि माग्न सकिएला र ?
पक्कै पनि तस्बिर लिएजस्तो सजिलो हुँदैन । यसबारे केही साथीहरूसँग कुरा गरेको छु । उनीहरूले दिने भएका छन् । मेरा बुबा राणाकालमै पोखरामा तस्बिर खिच्न आएर यतै बस्नुभएको हो । त्यसैले मसँग आठ/नौ वटा पुराना क्यामेरा छन् । ती सबै म्युजियममा राख्छु ।
भनेपछि अब पोखरामा छिट्टै फोटोग्राफिक म्युजियम हेर्न पाइनेछ ?
समय तोक्न गाह्रो छ । मैले सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा काम गर्न खोजेको छु । किनभने, निजी तवरबाट गर्दा आज खोल्यो, भोलि बन्द हुने डर हुन्छ । यस्तो भएमा त्यो मज्जा हुँदैन । खोलेर मात्रै भएन, जगेर्ना पनि गर्नुपर्‍यो । तस्बिरको रङ उड्न सक्छ, बिग्रन सक्छ । त्यसैले दिगो रूपमा खोल्न कसैको भरथेग त चाहिन्छ नै ।
प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३